Be ny hadino sy takon’ny pesta… | NewsMada
Be ny hadino sy takon’ny pesta…
Mbola ny ady amin’ny pesta aloha izao no mahabe resaka, ihetsiketsehana etsy sy eroa; eny, na misy aza ny tsy te hiray petsapetsa: tsy miteny, tsy mivolana. Miray tsikombakomba amin’ny ratsy? Azy ho azy ny azy, raha ny ataony ihany no ataony. Be tokoa ny raharaha hadinodino sy takona ho azy amin’izao.
Sanatria, zaran’ny sasany aza misy loza? Mifantoka any ny rehetra, ny saina amam-panahy. Hany ka toa tsy manahy zavatra hafa intsony, na eo aza ireo raharaha misoko mangina ihany: tsy mahafa-bela, mihasarotra sy mihalalina. Toy ny hoe andrasana handringana vao tena hojerena akaiky sy hikoropahana.
Tsy inona fa ny tsy fandriampahalemana, mamono sy mandringana vahoaka. Tsy mampiraika raha tsy manohintohina ny tena? Na fianakaviana io, na tombontsoa manokana, na toerana… Toy izany koa ny fidangan’ny vidim-piainana, ny ady sy fandrobana tany, ny tsy fisian’ny asa, ny fitokonana etsy sy eroa…
Lasa laharam-pahamehana sy imasoana ho azy amin’izao ny fanadiovana tanàna noho ny firongatry ny pesta. Efa tsy takona afenina izao, tsy azo anilihana andraikitra, mahamenatra… Rahoviana vao tena ho laharam-pahamehana ny tsy fandriampahalemana, ny fidangan’ny vidim-piainana, ny ady sy fandrobana tany… ?
Mamono sy mandripaka vahoaka koa ireo, fa tsy mampiraika. Toy izany koa ny tsy fanarahan-dalàna afitsoky ny mpitondra, ny fisian’ny tsimatimanota, ny kolikoly avo lenta, ny famelana ny vahiny hanjakazaka amin’ny tany sy ny harem-pirenena, ny raharaham-pirenena ananan-kavana, ny fanamparam-pahefana…
Mila fanadiovana avokoa ireny, famongorana hatrany ifotony sy hatrany amin’ny foibeny. Areti-mifindra, areti-mandringana… Rahoviana vao tena ihetsehana? Tsy vitan’ny teny midina na baiko, kabary tsy valina, fampitandremana… Be ny hadino sy takon’izao pesta izao amin’izany: ho vitavita sy tsy hitahita ho azy?
Tsy lavina, saika laharam-pahamehana avokoa ny zava-drehetra noho ny fahapotehana sy fanapotehana ny vahoaka sy ny firenena. Tsy ny fahaizana mandamina izany ve no hoe mitondra, mahatsinjo mialoha hatrany izay mety hitranga?